Kedụ ka anyị (anyị) si eji Social Media? | Martech Zone
Kedụ ka anyị (anyị) si eji Social Media?
Amaghị m mgbe okpomọkụ emebere ihe omuma a, mana odi nma na m ghaghi ikorita ya. Ihe mere o ji di nma bu nihi na odi n’eziokwu ma tunyere ya otú ndị ọkachamara n'ahịa si eji mgbasa ozi mmadụ na nkezi, onye na-abụghị ahịa. Ekwetaghị m na ndị ndu zuru oke na ụlọ ọrụ a na-ese onyinyo ojiji nke mgbasa ozi mmekọrịta. Ọtụtụ n'ime ha na-echetara m ihe inwe rick ngwa ngwa si n'ebe.
Anyị ga-emegharị atụmanya na ndị ahịa ọ bụla maka ihe ha ga-eme na ịgbaso ga-adị ka mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ gwụla ma ha nwere otu ìgwè kpakpando nke na-eme na mmemme ọ bụla ma na-ebipụta ọdịnaya na-enweghị nkwụsị, ha agaghị enwe otu nsonaazụ dịka onye dị ka anyị nke na-eme nke a. Ikekwe ọ bụ ya mere ahịa ọdịnaya ji laghachi na-ewere okpueze na ahịa na-eme ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu - na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-enye nnukwu nkwalite.
Tags: Facebookgoogle +okpomọkụụlọ ọrụ na-ekpo ọkụinstagramLinkedInahia na nkịtịPinteresteji usoro mgbasa oziSpotifytumblrTwitteriji soshal midiavesos
Super Festive Facebook Holiday Kọntestị Echiche